★မြန်မာ့အလင်း★: Pakistan 'needs more flood aid'
Oxfam's call comes as the United Nations (UN) prepares to launchanew appeal for Pakistan, seeking to treble the $460m (£295m) raised so far.
Jane Cockling, Oxfam humanitarian director, said the crisis in the country was "far from over yet".
The UK aid appeal by the Disasters Emergency Committee (DEC) has so far raised more than £54m.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:03 AM
နင်ကလဲ အရူးပဲ။ နင့်ကိုဆဲချင်ရင် တခြားနာမည်မသုံးဘူး။ ငါ့နာမည်နဲ့ပဲဆဲမှာ။ ကလေးအမေ.. ငါ့မေလောက်ရှိတာကြီး မသထီလို့မဆဲတာ။ ဆဲတယ်ဆိုတာ နုနုထွတ်ထွတ်လေးကို ဆဲမှ အရသာရှိတာဟ… ဒီမိုငတုံးရဲ့။ နင့်လင်စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ ဖြစ်တာ ငါ့ဆီလာမရှုပ်နဲ့။ အသက်ကြီးပြီးအချိန်မစီး ကြသူတွေ။